महिलाहरुमा ४० कटेपछि फेरि किन बैंस आउछ ? यस्तो छ कारण ? - Valley Khabar
Homeमनोरन्जनमहिलाहरुमा ४० कटेपछि फेरि किन बैंस आउछ ? यस्तो छ कारण ?
महिलाहरुमा ४० कटेपछि फेरि किन बैंस आउछ ? यस्तो छ कारण ?
August 11, 2019 dhan kush मनोरन्जन
२. सानै उमेरमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका महिलाहरु विवाहपछि उनीहरु अनेक सामाजिक बन्धनमा रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
जसका कारण उनीहरु जीवन अर्कै मोडमा आइपुगेको र आफ्नो जीन्दगीमा अमूल्य समय खेर गएको अनुभव गर्छन् । जसको कारण उनीहरु विवाहेत्तर सम्बन्धतर्फ उद्धत हुन्छन् ।
५. विवाहपछि आउने अनेक समस्या र परिवर्तनपछि महिलाहरुमा बच्चा भइसकेपछि झनै धेरै परिपक्कता आउनसक्छ । तर आफ्ना पतिप्रतिको विश्वास भने कम हुँदै जान्छ ।
उनीहरु बच्चा भइसकेपछि पतिले आफूलाई वेवास्ता गर्छ भन्ने सोच्छन् जसका कारण बाहिर साथी बनाउन तिर लाग्छन् ।
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं (भिडियो)
पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर,महिलाविना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ ! चित्त बुझे एक शेयर गर्नुहोला ।